पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध सबै संग सहकार्य गरेर पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने तिर लाग्नेछु
प्रकाशित मिति: 2016/09/30
ओरूसा थापा मगर, मिस टूरिजम–२०१६
प्वाईन्ट मिडिया प्रा.लि.ले गत भाद्र २५ गते आयोजना गरेको मिस टुरिजम–२०१६ मा विविए अध्ययनरत काठमाडौंकी ओरुसा थापा मगर विजयी भईन । मिस टूरिजम–२०१६ कि बिजेता ओरूसा थापा मगरसंग गन्तव्य नेपाल न्युज डट कमले गरेको कुराकानी :
मिस टूरिजम–२०१६ वारे कसरी जानकारी पाउनुभयो र भाग लिनु भयो ?
मेरो घर परिवारको माहौल नै पर्यटन संग नजिक छ । मेरो वुवा पहिले पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले मलाई पहिले देखि नै पर्यटन क्षेत्रमा रुचि थियो,त्यसवाहेक हाम्रो परिवारमा केहि विदेशी पर्यटकहरु पनि आईरहनुहुन्थ्यो । मिस टुरिजम–२०१६ हुँदैछ भनेर बिभिन्न मिडियामा समाचार आएको थियो । सामाजिक सञ्जालहरुमा पनि देखें । त्यसपछि म मिस टुरिजममा सहभागी भएँ ।
तपाईं मिस टूरिजम–२०१६ को विजेता बन्नुभएको छ, कस्तो अनुभव भईरहेको छ ?
अवश्य पनि निकै खूसी भएकी छु । देश भित्रवाट मात्र होईन,विदेशवाट पनि फोन,म्यासेजहरु आईरहेको छ । तर पनि म मिस टुरिजम–२०१६ हुनुलाई मात्र सफलता मान्दिन, आगामी दिनमा पर्यटन क्षेत्रको लागी के गर्न सक्छु वा सक्दिन,त्यसले नै मलाई सफल वा असफल बनाउँछ । यस अर्थमा मेरा लागि जिम्मेवारी बढेको छ,पर्यटन क्षेत्रमा केहि गरेर देखाउँछु ।
मिस टूरिजम–२०१६ भईसकेपछि अव के गर्नुहुन्छ ?
मलाई पहिले देखि नै पर्यटन क्षेत्रमा रुचि थियो । त्यसवाहेक जब म मिस टूरिजम–२०१६ को उत्कृष्ठ दशमा छनोट भएँ,त्यसपछि ट्रेनिङको अवधिमा मैले पर्यटन क्षेत्रवारे धेरै कुरा सोधें । मेरो रूचि सानै देखिको रुचि नयाँ–नयाँ ठाउहरुकोे घूमफिर गर्ने हो । म बालबालिका, अपाङ्ग, वृद्धवृद्धा,अनाथ असक्तहरूलाइ सहयोग गर्न मन पराउँछु । त्यसवाहेक नेपालमा पर्यटन क्षेत्रमा महिलाको सहभागितामा न्यून रहेको छ, कसरी पर्यटन क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता वृद्धि गर्न पहल गर्नेछु । त्यसवाहेक पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध सबै संग सहकार्य गरेर नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने्तिर लाग्नेछु । मेरो रुचि नै मोडलिङ र पर्यटन क्षेत्रमा छ ।